रक्सि पिएपछि नेपालीहरु किन अंग्रेजी बाेल्छन् ? जान्नुहोस् वैज्ञानिक कारण - hamro Desh
रक्सि पिएपछि नेपालीहरु किन अंग्रेजी बाेल्छन् ? जान्नुहोस् वैज्ञानिक कारण
विश्लेषकहरूले यो अध्ययनमा एउटा समस्या औंल्याएका छन्। यसमा सहभागीहरूलाई आफूले खाएको पेय पानी हो कि मदिरा भन्ने ज्ञान थियो। त्यसैले, उनीहरूको बोलाइ रक्सीको प्रभावले नै सुध्रिएको हो कि त्यसमा मानसिक कारण पनि जिम्मेवार छ भनी प्रस्ट भन्न नसकिने विश्लेषक बताउँछन्। यसलाई अझ स्पष्ट पार्न अर्को चरणको अनुसन्धान हुनुपर्ने औंल्याइएको छ।
रक्सी र भाषाबीच सम्बन्ध झल्काउने यो अध्ययन पहिलो भने होइन। सन् १९७२ मा भएको यस्तै अध्ययनमा थोरै परिमाणको रक्सी सेवनले थाइभाषीहरूको अंग्रेजी उच्चारणमा सुधार देखिएको थियो।